ရေကြောင်းငါးမွေးကန် | ငါး၏
ငါတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ရေချိုငါးနှင့်ဆားငန်ငါး။ နှစ် ဦး စလုံးငါးမွေးကန်ထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးမွေးကန်အမျိုးအစားတစ်ခုစီရှိရန်လိုအပ်သမျှကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေရာမှာသင်လိုအပ်တာအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မယ် တစ်ဦးရှိသည် အဏ္ဏဝါငါးမွေးကန် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါးငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင်နေထိုင်နိုင်သည့်အတွက်။
အကြံပေးချက်များသဘာဝနှင့်အလွန်ဆင်တူသောနေကျက်စားရာနေရာတွင်နေထိုင်ရန်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသေးစိတ်နှင့်အကြံဥာဏ်များ၊ ငါတို့အတူတူမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ငါးကိုကြိုက်ရင်အဲဒါတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နဲ့ငါတို့သိရမယ့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပင်လယ်ငါးမွေးမြူရေးတွင်ပင်လယ်ရှင်သန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့နိုင်ပါဘူး သူတို့သတ္တဝါများဖြစ်ကြသည် ပြီးတော့သူတို့ကိုဂရုစိုက်ရမယ်၊ ဒါမှသူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကြိုးပမ်းမှုမှာဒါမှမဟုတ်သေချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
por ဂျာမန် Portillo လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
ငါးမွေးကန်တစ်ခုမှအလင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငါး၏ဘဝတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အလင်းကိုရှာဖွေရန် ...
သင်ကရေချိုဒါမှမဟုတ်ရေငန်ငါးမွေးကန်တစ်ခုရှိလားဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ သင်ဤရွေးချယ်မှုကိုလုပ်လျှင် ...
ခဲတံနီ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ ၄ င်း၏အရောင်ဖြစ်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာမှောင်မိုက်အလျားလိုက်အစင်းသုံးခု ...
ငါးမွေးကန်ကိုတပ်ဆင်သောအခါအလွှာများကိုမမေ့ပါနှင့်။ ဈေးကွက်ထဲမှာကျယ်ပြန့်တဲ့အကွာအဝေးရှိပါတယ် ...
Silver, argos ငါး
Silver argos ငါးသည်ရေချိုဝါသနာရှင်များအတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
အဆိုပါ mullet ငါးမွေးမြူရေးအတွက်မွေးမြူဖို့အသင့်တော်ဆုံးမျိုးစိတ်မဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်။ သို့သော်၎င်း၏showရာမအရောင်သည် ...
သင့်လျော်သောအဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ကိုရရှိရန်အတွက်ငါးမွေးကန်များတွင်အလင်းရောင်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအသင်းများကို ...
por ရို Sanchez လွန်ခဲ့တဲ့7အနှစ် .
အမြီးသုံးချောင်းရှိသောငါးသည်စင်တီမီတာ ၂၀ ခန့်တွင်အလျားလိုက်ဖိအားပေးထားသောခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ...
Serranidae မိသားစု၏ Serrano ငါး
အဆိုပါ serrano ငါး, ၎င်း၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမည် serrano scriba ဖြစ်ပါသည်, ကပိုပျော့ပေမယ့်က elongated ခန္ဓာကိုယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ...
Vieja del Agua, ဒီဟာအံ့သြစရာအကောင်းဆုံးငါးတွေထဲကတစ်ခုပါ
ကျနော်တို့ Yeti ကဏန်းကြည့်ပါ
စောင့်ရှောက်မှုနှင့် puffer ငါး၏ဝိသေသလက္ခဏာများ
Bicolor Labeo ငါး